စစ်အာဏာရှင်စနစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မှောင်မိုက်တန်ခိုး၊ ဝိညာဉ်ဆိုးများ ကြီးစိုးခဲ့သည်။ ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်များစွာ နေ့ညမပျက်၊ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်း များစွာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မျက်ရည်ဖြင့် ဆုတောင်းသံများကို ဘုရားသခင်နားညောင်းတော်မူခဲ့သည်။ ဆုတောင်းချက်များ ပြည့်ဝလာပြီးသည့်နောက် ကျွန်ုပ်တို့ အဆက်မပျက် ဆက်လက်ဆုတောင်းရန်လိုနေဆဲဖြစ်သည်။
မိတ်ဆွေတို့၏ အသင်းတော်၊ မိတ်သဟာရများ မြန်မာပြည်ခေါင်းဆောင်များအတွက် အထူးဆုတောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရန် အရေးကြီးနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အသင်းတော်တစ်ခုသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း နံနက်၁၂နာရီအထိ အစာမစားပဲ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကို ယနေ့တိုင်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကချင်ပြည်နယ်စစ်ပွဲများ ရပ်ဆိုင်းရန် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တဆက်တည်းဆုတောင်းခြင်း Chain Prayers ကို ရက်သတ္တပါတ်လုံး ဆုတောင်းနေသော အသင်းတော်၊ မိတ်သဟာရ များစွားရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရုတ်တရက် (2011-2017) ဖြစ်ပျက်မှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်မှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရာတွင် မြန်မာပြည်တွင်းမှာ အစိုးရမင်းများ၊ နိုင်ငံခြားမှရောက်လာသော ဝိသမလောဘ၊ ခွဲဝေယူသည့်စနစ်ဖြင့် ခရိုနီစီးပွားရေးစနစ်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်သည်။ ပြန်လှည်ဦးတည်ပေးရန် စိတ်စေတနာကောင်းရှိသော နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များက ကြိုးစားနေကြပါသည်။
မြန်မာခေါင်းဆောင်များနှင့်လက်နက်ကိုင်များသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ၂၁ရာစု ငြိမ်းချမ်းရေးစတင်နေပါသည်။ ကချင်၊ ဝ၊ ကိုးကန့်၊ ရှမ်း၊ ကရင်၊ ကယား၊ မွန် စသည့် တိုင်းရင်းသားနယ်စပ်အခက်အခဲများစွာရှိသည်။ တစ်ဦးချင်းစီ အားနည်းချက်များစွာရှိသည်။ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ပြေလည်သွားမည်ဟု မျှော်လင့်သည်။ အကျိုးတူ စီးပွားရေးခွဲဝေမှု ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်များဖြင့် တရားမျှတသော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပေါ်လာဖို့ ဆက်လက်ဆုတောင်းရပါမည်။
လက်ရှိ မြန်မာပြည်တွင် ဝိသမလောဘသမားများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ထိမ်းချုပ်ရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရမင်းများ လုပ်ဆောင်လာဖို့ ဆိုသည်မှာ ပြည်သူလူထုအပေါင်းနှင့် ယုံကြည်သူများ ဆက်လက်ပြီး အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်း (ဥပုဒ်စောင်ဆုတောင်းခြင်း)ဖြင့်သာ ဘုရားသခင်နားညောင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၃ ဆောင်းပါးကို ၂၀၁၇ နှင့်လျော်ညီစွာ ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်။
Posted by Witmone at 1:28 PM0comments
Labels: ၀ိညာဉ်ရေး, ဆောင်းပါး
စွဲလမ်းမှုမှလွတ်မြောက်နည်း Escape from Addiction
၂၀၀၃ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ခုနှစ် ၈နှစ်ကာလအတွင် တရုပ်ပြည်မှ ကုဋေကြွယ်သူဌေး ၇၂ဦးအကြောင်း သုတေသနပြုမှန်တမ်းကို ဂျာနယ်တစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ သူဌေးကြီးများ ဇတ်သိမ်းအကြောင်း ဖော်ပြချက်၌ ၁၅ဦး အသတ်ခံရသည်။ ၁၇ဦးက မိမိကိုယ်ကို သတ်သေကြသည်။ ချမ်းသာမှုက လူကို စိတ်ချမ်းသာမှုမပေးပါ။ ၇ဦးက သင်္ကာမကင်းဘွယ်သေဆုံးရသည်။ ၁၄ဦးက ရာဇ၀တ်မှုကြောင့် အဖမ်းခံရကာ သေဒဏ်ပေးခံလိုက်ရသည်။ ၁၉ဦး ရောဂါဆိုးနှင့်သေကြသည်။ အကြောင်းမှာ ကြွယ်ဝ၍အရက်သောက်၊ ဆေးလိပ်သောက်၊ မတရားမေထုန်လိုက်စားပြီး သေကြရသည်။ ၇၂ဦးစလုံး ဇတ်သိမ်းမလှကြပါ။ ထိုငွေကို ဘုရားသခင် ခံစားခွင့်ပေးခြင်းသည် သူတို့က အခြားသူများကို ဝေငှပေးဖို့ဖြစ်ကြောင်း သူတို့မသိလိုက်ကြပါ။
အမေရိကန်ပြည်ရှိ သန်းကြွယ်သူဌေးများစွာထဲမှာ တစ်ဦးအကြောင်း ဆင်ခြင်လိုပါသည်။ သူသည် တစ်နာရီလုပ်ရာတွင် လေးပြားရသည်။ သူတို့တိုင်းပြည်၌ တစ်နေ့ရှစ်နာရီလုပ်ရသည်။ ၃၂ပြားရသည်။ သူက ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပေးဖို အဆင်မပြေ၍ သူ၏သူဌေးအား ၂နာရီတိုးပြီး လုပ်ရဖိုပြောသည်။ သူဌေးက သူ့ကို အိုဗာတိုင်ကြေးမပေးနိုင်ဟု ပြောသည်။ သူက မပေးပါနှင့်၊ အလုပ်သာပေးလုပ်ပါ..ဟု ဆိုသဖြင့် သူဌေးက ပေးလုပ်ပါသည်။ ထိုအခါ သူက ၁၀နာရီလုပ်သဖြင့် လုပ်အားခတွက်ပါက ၄၀ပြားရသင့်၍ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ ၄ပြား လှုပါသည်။ အချိန်ပိုလုဒပ်ရသော်လည်း မခိုမကပ်ပဲ နေပူထဲလုပ်သဖြင့် အလုပ်ရှင်က သူ့အားခေါ်ပြီး ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သောသူ၊ ဘုရားဘုန်းရှိသောသူများသည် လူပျင်းများမဟုတ်ကြပါ။ ထိုလူငယ်ကလေးသည် တနာရီ၎ပြားမှ တစ်ပတ်တွင် ဒေါ်လာ၂၀ရသောသူ ဖြစ်လာသညပ်။ သူသည် နောင်တချိန်တွင် သန်းကြွယ်သူဌေး လက်ချိုးရေတွက်ရသည့် အချိန်ကာလက သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်လာပြီး တစ်နှစ်တစ်နှစ် ကမ္ဘာကြီးကို ဒေါ်လာသန်း၇၅၀ လှုနိုင်သူဖြစ်လာသည်။ ထိုသူဌေးကြီးသည် အသက်၉၇နှစ် အသက်ရှည်ပြီး သွားတစ်ချောင်းမှမကျိုးပါ။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရှိသည့်နောက် သူ့သားစဉ်မြေးဆက်ကလည်း ကမ္ဘာကြီးကို ဆက်လက်အကျိုးပြုနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကား အမေရိကန်သူဌေးကြီး ဂျွန်ဒီရောက့ကီဖယ်လာ ဖြစ်သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းထင်ရှားအောင် အသက်ရှင်ခဲ့သလို သားစဉ်မြေးဆက်ကိုလည်း အမွေပေးခဲ့ပါသည်။
ဘုရားဝတ်၌ မွေ့လျော်ခြင်းသည် အကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်ဟု သူတို့သည် စိတ်ထင်ကြသည်။ ထိုသို့သော သူတို့ကို ရှောင်လော့။ ရောင့်ရဲသော စိတ်ပါလျှင် ဘုရားဝတ်၌ မွေ့လျော်ခြင်းသည် ကြီးစွာသော အကျိုးစီးပွားမှန်၏။ အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် ဤလောကထဲသို့ အဘယ်အရာမျှ မပါပဲ လာသည်ဖြစ်၍ ထွက်သွားလျှင်လည်း အဘယ်အရာမျှ ယူမသွားနိုင်ကြဟု ထင်ရှားလျှက်ရှိ၏။ သို့ဖြစ်၍ စားရန်၊ ၀တ်ရန် ရှိသမျှနှင့် ရောင့်ရဲလျှက် နေကြကုန်အံ့။ ငွေရတတ်ခြင်းငှါ အလိုရှိသောသူတို့သည် အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်း၊ ဘမ်းမိခြင်း၊ မိုက်မဲဖျက်ဆီးတတ်သော တပ်မက်ခြင်းများထဲသို့ ကျရောက်တတ်၏။ ထိုသို့ သောအားဖြင့် လူတို့သည် အကျိုးနည်းခြင်း၊ ပျက်ဆီးခြင်း၌ နစ်မွမ်းတတ်ကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငွေကိုတပ်မက် ခြင်းသည် မကောင်းသောအမှုအပေါင်းတို့တွင် မူလအမြစ်ဖြစ်သတည်း။
Posted by Witmone at 1:17 AM0comments
နှုတ်ကပတ်တော် (ဘုရားသခင်၏သြ၀ါဒ) - ဥပမာ၊ မတရားသော မေထုန်
နှုတ်ကပတ်တော် (ဘုရားသခင်၏သြ၀ါဒ) ဓမ္မဟောင်း (ပညတ်တရားခေတ်-ပညတ်၁၀ပါး) ၁။ ငါမှတပါးအခြားသောဘုရားမကိုးကွယ်ရ ၂။ ငါဖို့အလို့ငှာ ရုပ်ထုမပြုလုပ်ရ ၃။ ငါ့ နာမကို အလွဲမသုံးရ ၄။ ဥပုဒ်နေ့ကို အစဉ်သာ သန့်ရှင်းစေပါ ၅။ သင့်၏မိဘများကို ရိုသေလေးစားပါ ၆။ သူအသက်ကိုမသတ်ရ ရ။ သူမယားကိုမပစ်မှားရ (မတရားသောမေထုံမလုပ်ရ) ၈။ မခိုးရ ၉။ မဟုတ်မမှန်သက်သေမခံရ ၁၀။ တပ်မက်ခြင်းမရှိရ (သူ့တပါးပစ္စည်၊ မယား၊) . ဓမ္မသစ် (ချစ်ခြင်းမေတ္တာ) ၁။ ဘုရားကို ကိုယ်နှင့်အမျှချစ်ခြင်း ၂။ ကိုယ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုချစ်ခြင်း . မြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ အဆောက်အဦ၊ လောကအရာတွေထက် ၀ိတ်ဝိညာဉ် ပြောင်းလဲခြင်းကို ဦးစားပေးရပါတယ်။ . . ယုံကြည်ခြင်း .... Faith ယေရှုကိုရရှိဖို့၊ ကျေးဇူးတော် ခံစားဖို့ ဆိုတာ အပြောသာလွယ်ပါတယ်။ လက်တွေ့တော့ အလွန့်အလွန်ခက်ပါတယ်။ က ကယ်တင်ခြင်း အရင်ရှင်း ..ဆိုပြီး ယေရှုကို ယုံပါပြီ၊ုယုံပါတယ် ကယ်တင်ခြင်းရပြီလို့ ပြောပေမဲ့ ၀ိညာဉ်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက် ခရစ်ယန်အသက်တာ မကောင်းသူတယောက် ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ . ဓမ္မဟောင်း ၁၀ပါး၊ ဓမ္မသစ် ၂ပါး ..ဒါတွေဟာ လူသားတယောက်အနေနဲ့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ပြည့်စုံအောင် မကျင့်ကြံနိုင်ပါဘူး။ ဖြောင့်မတ်သောသူ တစ်ယောက်မျှ မရှိ ..ဆိုတဲ့အတိုင်း လောကပညတ်တွေအရဆို ဘယ်သူမှ ကယ်တင်ခြင်း မရနိုင်ပါဘူး။ . ယုံကြည်ခြင်း တခုထဲနဲ့၊ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲ ကယ်တင်ခြင်းကို ရပါတယ်။ ဒီတော့ ပညတ်တရားတွေကို မစောင့်ရတော့ဘူး မဟုတ်ပါ။ ကယ်တင်ခြင်း ရပြီးသူဟာ နေ့တိုင်း၊ အချိန်တိုင်း နောင်တ ရပါတယ်။ အမှားကြီးတွေကို နောင်တရပြီး နောက်တဖန်မလုပ်တော့ပါဘူး။ . ဥပမာ .. မတရားသောမေထုန်၊ ရှင်ယောဟန် အခန်းကြီး(၈း၁၁) မှာ သခင်ယေရှုနဲ့ ခဲပေါက်သတ်ခံရမဲ့ ပြည့်တန်ဆာမိန်းမ အဖြစ်အပျက်ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။... ငါသည်လည်း သင့်၏အမှုကို မစီရင်၊ သွားလော့၊ နောက်တဖန် ဒုစရိုက်ကို မပြုနှင့် ဟု မိန့်တော်မူသည် ..လို့ ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီ မိန်းမ နောင်တ တကယ်ရပြီး နောက်လုံးဝမလုပ်တော့ပဲ ယေရှုနောက်ကို လိုက်ပါတယ်။ တကယ် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိပါတယ်။ ဘုရားသခင် ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ အပြစ် မရှိပါဘူး။ နောင်တနဲ့ နောက်တဖန်မလုပ်တာပဲ ဘုရားသခင် နှစ်သက်ပါတယ်။ . မတရားသော မေထုန် ဆိုတာ ဘာလဲ ..ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမှာ ပြသနာအကြီးကျယ် ဖြစ်လာပါတယ်။ လက်မထပ်ပဲ အတူနေခြင်းက အလွန်များပြားနေတဲ့ ခေတ်ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ဖြေဖျော်ခြင်း၊ ပိုဆိုးဝါးတဲ့ လိင်တူ တွေကိုလဲ အသင်းတော်မှာတောင် ခပ်တည်တည်ဖြစ်နေပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေမှာလဲ လိင်ဓါတ်ပုံ ၊ ဗွီဒီယိုတွေ အလွယ်တကူ ရနေပြီး၊ တယောက်နဲ့တယောက် မိုဘိုင်း၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ စက္ကန့်ပိုင်း ဆက်သွယ်၊ ပို့ပေးနိုင်တဲ့ ခေတ်ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မဆရာနဲ့ အသင်းတော်လူကြီးတွေလဲ မတရားမေထုန် လုပ်နေသူကို မပြောရဲ၊ ပြောလဲမထူးဘူး .. အသင်းတော်က နဲ့ သင်းအုပ်များ အလွန်အခက်ခဲ ဖြစ်နေရတဲ့ ခေတ်ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ . ဒီအကြောင်းတွေ တခြား ဓမ္မဆရာတွေ ပြက်ပြက်သားသား မပြောကြပေမဲ့၊ GMYC ဆရာဒေးဗစ်လား၊ ဆရာစံတိုး၊ ဆရာဇော်မင်း၊ ဆရာတူးဂျာ်၊ ဆရာသြဂတ်စတပ်၊ ဆရာဒေါမနစ်၊ ဆရာဥိးတင်မောင်ထွန်း ..စတဲ့ ဆရာများစွာ လူငယ်တွေကို ဟောကြား၊ ပြောကြားနေကြပါတယ်။ မီဒီယာမှာလဲ ပြက်သားစွာ ရိုက်ကူးတင်ဆက်တဲ့ ဗွီဒီယိုတွေ အင်တာနက်မှာ တွေ့ရပါတယ်။ . . . ဆရာပက်ထရစ်ဂေဗြဲ .ရဲ့ သက်သေခံခြင်းကို နားထောင်ကြည့်ပါ။ အကျိုးထူးမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်တင်ခြင်း ရပြီးသူများ မိမိကိုယ်ကို သန့်ရှင်းအောင် ကြိုးစားရပါတယ်။ ကားတိုင်လမ်းသို့ ကြိုးစားတက်မည် ဆိုတာ ကယ်တင်ခြင်း စိတ်ချသူများ လျှောက်ရမဲ့ လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်မှာ သခင်သခင် လို့ခေါ်ရင် သင့်ကိုငါမသိ လို့ မဖြစ်ရအောင် တိုက်တွန်းနိုးဆော်ခြင်း ဗွီဒီယိုလေး ဖြစ်ပါတယ်။
. Link https://www.youtube.com/watch?v=-Ihb5tCrOTU . . . နောက်ဆုံးသော ကာလကိုလည်း ဆရာပက်ထရစ်ဂေဗြဲ နဲ့ ဆက်လက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Sia Sian ဗွီဒီယို သက်သေခံချက်များကို ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်။ . . .
BurmeseBible May 2017... . .
Posted by Witmone at 5:05 AM0comments
Labels: ၀ိညာဉ်ရေး, ကိလေသာ
အခုခေတ် အိုင်ဖုန်းစွန့်ဥိးတီထွင်သူ စတိဂျော့ကွယ်လွန်သွားချိန် သူ့ဘ၀ မနက်ဖန်ငါသေပြီး ဆိုပြီး အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ရင်း၊ မိဘမဲ့ကလေးဘ၀၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းထွက်ဘ၀၊ အေပဲကွန်ပြူတာသူဌေးကြီးအဖြစ်ရောက်ခဲ့တယ်။ လူယုံသတ်သလို အေပဲက ထွက်ခွာခဲ့ရပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက်ကြိုးစားရင်း နောက်ဆုံး အေပဲက ပြန်ခေါ်တယ်၊ အိုင်ဖုန်း ဆိုတာ တီထွင်ပြီး ဇနီး၊ သားသမီးများနဲ့ အလွန်နာမည်ကျော်၊ အလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝသူ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကင်ဆာရောဂါခံစားပြီး ဘ၀နောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာ မေတ္တာတရားအကြောင်း နောင်တနဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူ့မှာ မိသားစုရှိပေမဲ့ အချိန်ပြည့်ဆရာဝန်၊ သူနာပြုတွေ ရှိပေမဲ့ ဘ၀နောက်ဆုံးအချိန်များမှာ မေတ္တာငတ်ခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုရင်း တမလွန်ဘ၀ကူးပြောင်းသွားပါတယ်။
ငွေကြေးဥစ္စာကမှ ထီပေါက်၊ ရတနာသိုက်တွေ့ပြီး နေ့ချင်းချမ်းသာနိုင်တယ်။ မေတ္တာတရား ဆိုတာ အချိန်များစွာ ပေးဆပ်ရပါတယ်။ မိမိကို မေတ္တာထားသူ တယောက်ရှိရင်ပဲ ဒီလောကမှာ လုံလောက်ပါတယ်။
ငယ်ရွယ်စဉ်မှာတော့ မေတ္တာတရားကို နားမလည်ကြပါ။ ဖိုမ ၊ မောင်နှမ၊ သူငယ်ချင်း ၊ ဆရာတပည့် ချစ်ခင်မှုများ (မြန်မာလို ၁၅၀၀၊ ၅၂၈) တွေပဲ မြင်ကြပါတယ်။ အနန္တမေတ္တာ အင်္ဂလိပ်လို အဂါပေ Agape Love ဆိုတာကိုတော့ ရင့်ကျက်လာချိန်မှာ ပိုပြီးသိလာပါတယ်။
အောင်မြင်သူ ဆိုတာ ဘုရားမေတ္တာ ရရှိခံစားနေသူကိုပဲ အောင်မြင်သူလို့ ခေါ်ချင်ပါတယ်။ နောက်သေချာတာတခုက ဘုရားမေတ္တာ ရရှိခံစားသူမှာ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ သူ့ကိုမေတ္တာပေးနေသူတွေ အများအပြားရှိပါတယ်။
တနေ့က စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ မိတ်ဆွေတယောက် ယာဉ်တိုက်မှုနဲ့ လမ်းမပေါ်မှာ ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပါတယ်။ သူ့ဇနီးကတော့ အသုဘမှာ ပြောရှာပါတယ်။ သူကတော့ ပြီးသွားပေမဲ့ ငါကတော့ ဒုက္ခဆင်းရဲတွေနဲ့ ကျန်ရစ်ပြီပေါ့..လို့ ၀မ်းနည်းစွာ ပြောပါတယ်။ နေစရာအိမ်လဲ ရှိ၊ သားသမီး၃ယောက် အလုပ်ကိုယ်စီ ရှိနေကြပြီး အမေမုဆိုးမအိမ်မှာပဲ စုဝေးနေကြတယ်။ နေတတ်ရင်တော့ ဘ၀မဆင်းရဲပါဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တလ ကျပ်၃သောင်းပေးရတဲ့ တဲအိမ်လေးတွေမှာ ငှားနေရသူအမြောက်အများ ရှိနေကြတယ်။ တောရွာတွေမှာဆို ပိုဆိုးသေးတယ်။ ဘယ်လောက် ဆင်းရဲပါစေ၊ ကျန်းမာစွာ ၀င်ငွေရှိတဲ့အလုပ်ကလေး၊ အိမ်ငှားခလေး၊ ကူညီပံ့ပိုးမဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ရှိနေရင်တော့ ဆင်းရဲမွဲတေပေမဲ့ ဘ၀အခက်ခဲကြီးတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။
ဆင်းရဲဒုက္ခများက ဘ၀အခက်ခဲကြီးလားလို့ မေးရင်၊ မဟုတ်ပါ ..လို့ဖြေရပါမယ်။
နာမကျန်း၊ ရောဂါခံစားနေချိန်က ဘ၀အခက်ခဲကြီးလားလို့ မေးရင်လဲ၊ မဟုတ်ပါ ..လို့ဖြေရပါမယ်။
မူရစ် အရက်စွဲနေခြင်း၊ မတရားသောမေထုန်(အိမ်ထောင်ရေးပြသနာ)၊ ရာဇ၀တ်မှု၊ ခိုးဆိုးလုယက်မှု၊ မတရားစွတ်စွဲခံရမှု၊ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံမှုကိုပဲ ဘ၀အခက်ကြီးလား။
ပြန်ကောင်းမလာတော့မဲ့ ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရချိန်၊ အသက်ကယ်စက်နဲ့နေရချိန်၊ (သို့မဟုတ်) မိမိကိုယ်တိုင် ဘာမှမလှုပ်ရှား၊ မစားသောက်၊ ဆီးဝမ်းမသွားနိုင်၊ ပက်လက်ဘ၀နဲ့ နေရချိန်လား။
ဒါတွေအားလုံးဟာ အခက်ခဲကြီးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။
အဖေါ်မဲ့ တယောက်တည်း၊ ဘယ်သူနဲ့မှ မိတ်ဆွေမရှိ ဖြစ်နေချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Lonely Life လို့ခေါ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ပွင့်လင်းစွာ စကားပြောဖေါ်မရှိ ဖြစ်နေတဲ့ ဘ၀ဟာ မိမိဘ၀မှာ အလွန်ခက်ခဲတဲ့ ကာလဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေရဲ့ အမြင်နဲ့ ကွဲလွဲမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။
စာရေးသူ အနေနဲ့ကတော့ စကားပြောဖေါ်မရှိခြင်း ဆိုတဲ့ ဘ၀အကြီးမားဆုံး အခက်ခဲကြီးရဲ့ အဖြေကတော့ မိမိကိုယ်ကို ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီး ဆိုပြီး ပြောင်းလဲဖို့၊ တနည်းအားဖြင့် အခုကတည်းက မေတ္တာရှင်ကို ရှာဇွေဖို့ အချိန်ပေးဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။
လူဆိုတာ တကယ်တော့ ကိုယ်ကျိုးရှာ သတ္တ၀ါတွေဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအကျိုးပဲ ကြည့်တတ်ကြပါတယ်။ မိမိမှာ ငွေရှိရင် မိမိအတွက်ပဲ သုံးတတ်တယ်။ မိမိသားသမီး၊ ဇနီး၊ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ေဆွ၊ စတဲ့ မိမိချစ်နှစ်သက်သူများကို ငွေ၊ လက်ဆောင် ပေးတတ်ပါတယ်။
အလားတူပဲ မေတ္တာဆိုတာလဲ မိမိမှာ ရှိနေမှ သူများကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ မေတ္တာ ဘယ်ကရနိုင်မလဲ ..မေးခွန်းကတော့ မေတ္တာရှင်ကနေပဲ မေတ္တာရနိုင်ပါတယ်။ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ မေတ္တာရှင်တွေ များများရှိလေလေ မိမိလည်း သူတို့အမျှဝေတဲ့ မေတ္တာတွေ ရရှိပြီး၊ ကိုယ်ကလဲ တပါးသူတွေကို မေတ္တာပေးဆပ်နိုင်မှာပါ။
ဘုရားမဲ့ဝါဒီတွေ၊ ဘုရားစုံဝါဒီတွေ ရှိသလို စာရေးသူကတော့ ခရစ်ယန်အယူဝါဒ သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့အတွက် မေတ္တာရှင်က ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူနောက်လိုက်၊ သူ့ကို ယုံကြည်၊ သူကိုအားကိုး၊ သူစကားနားထောင်၊ သူကို လေးစား ကြောက်ရွံ့ တယ်ဆိုရင်၊ ဘုရားမကြိုက်တာတွေ မလုပ်ရင်တော့ ဘုရားသခင်ဆီက မေတ္တာတွေ တသွင်သွင် စီးဆင်း၊ ခံစား ရရှိမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က လောကသားတွေကို ချစ်တဲ့အတွက် တပါးတည်းသောသားတော် ယေရှုကို လောကီသားတွေအတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် အသေခံ စွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ မိမိကသာ အဲဒီမေတ္တာကို ခံယူတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
မေတ္တာရှင် ယေရှုကို တကယ်ရရှိပြီဆိုရင် ဘ၀အောင်မြင်မှု ရရှိပါပြီ။ အခက်ခဲအားလုံးကို ကျော်လွှားအောင်မြင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အထီးကျန် မဖြစ်တော့ပါဘူး။ နေရက်စဉ်တိုင်း၊ အချိန်တိုင်း မိမိနဲ့စကားပြောဖော် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းအဖြစ်၊ မိမိရဲ့ အရှင်သခင်အဖြစ် လက်ခံပြိးချိန်ကစပြီး မိမိဘ၀ အောင်မြင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ (ယေရှုနဲ့နေ့စဉ်စကားပြောခြင်း..အကြောင်း၊ ကျမ်းစာဖတ်ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ ဧ၀ံဂေလိလုပ်ငန်းများ စသဖြင့် ယေရှုနဲ့သွားလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်)။
လူမည်သည်ကား ခရစ်တော်၌ရှိလျှင် အသစ်ပြုပြင်သော သတ္တ၀ါဖြစ်၏။ ဟောင်းသောအရာတို့သည် ပြောင်းလဲ၍ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် အသစ်ဖြစ်ကြပြီ။ ထိုသို့ဖြစ်သော် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ဖြစ်ကြ၏။
Posted by Witmone at 2:25 AM0comments
Posted by Witmone at 8:34 PM0comments
Posted by Witmone at 8:31 PM3comments
Posted by Witmone at 1:03 PM0comments
လက်တွေ့ ခရစ်ယာန်အသက်တာ ... ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေ။
သေချာတာ တခုကတော့ ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပညတ်တရားများဟာ စာကားလုံးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ သက်သေပြဖို့ လက်တွေ့အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ကတော့ ... ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ သားတော်သခင်ယေရှုရဲ့ ကျေးဇူးတော် နဲ့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ မိတ်သဟာရဖွဲ့ခြင်း (၃)မျိုးတို့ အလွန်လိုအပ်ပါတယ်။
က .. ကယ်တင်ခြင်း ရပြီးသူများဖြစ်ပါတယ်။
ခ .. ခရစ်ယာန်အသက်တာ လိုက်လျှောက်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
တေးသီချင်း၊ဗွီဒီယို (17) ရှိကြပါတယ်။
Posted by Witmone at 6:24 PM0comments
မနေ့က ပရောဖက်ဆာ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ဝတ္တု ပဉ္စမအကြိမ်ထုတ်ဝေခြင်း ဘုမ္မာဝတီစာပေ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ ကို ဖတ်မိပါတယ်။ လျို့ဝှက်သဲဖိုစာအုပ်မှာ တပည့်ဖြစ်သူ အိုလံ အတွက်လက်စားချေပြီး ပရော်ဖက်ဆာဆိတ်ဖွားက လူသတ်မိတယ်။ တကယ်တော့ သူ့တပည့် အိုလံ ဆိုတာ ဆားပုလင်းနှင်းမောင် လွှတ်ပေးထားတဲ့ စုံထောက်ဖြစ်နေမှန်း သိသွားတော့၊ လောကကြီးကိုစိတ်ပျက်မိတယ်။ အိုလံ အလွန်သနားတဲ့ မိန်းကလေးကို ပရောဖက်ဆာဆိတ်ဖွားက ကူညီခဲ့မိတာ အကျိုးနည်းဖြစ်ရတယ်။ နောက်ဆုံး လူသတ်မှုနဲ့ သေဒဏ်ကျတော့မဲ့ ပရောဖက်ဆာ ဆိတ်ဖွားကို ဆားပုလင်းနှင်းမောင်က ခင်ဗျားရဲ့ရန်သူကတော့ ခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ လက်စားချေချင်တဲ့ မကောင်းတဲ့စိတ်ထားပဲ လို့ပြောလိုက်တယ်။ ပရောဖက်ဆာ ဆိတ်ဖွားကတော့ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်ကို သတ်ရမှကြေနပ်မယ် ဆိုပြီး ကြိမ်းဝါးရင်း အဆုံးသပ်ထားပါတယ်။
၁။ ပရောဖက်ဆာ ဆိတ်ဖွား ပြုစုဆဲဖြစ်တဲ့ လောကနိတိ ကျမ်းကြီးကို လွှင့်ပစ်လိုက်တယ် ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။
၂။ စာရေးဆရာ မင်းသိင်္ခ ဆီ မင်းသိင်္ခ အထုပ္ပတိ ရေးချင်တဲ့လူငယ်စာရေးဆရာကို ငြင်းလိုက်တယ်။ အကြံပြန်ပေးလိုက်တာကတော့ ...မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံလုပ်သွားသူများအားလုံး ပါတဲ့ ဝတ္တုတစ်ခုရေးစေလိုပါတယ်..တဲ့။
လောကနိတိကျမ်းကို လွှင့်ပစ်လိုက်ပြီး လက်စားချေလိုစိတ်ကြီးတဲ့ ပရော်ဖက်ဆာဆိတ်ဖွား က လူတွေကိုကူညီပေမဲ့ ကိုယ်ပဲခံရလေ့ရှိတယ်။ လူတွေဟာ ကျေးဇူးမသိတတ်ပါဘူး... ဆိုတာကိုတော့ လက်ခံရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ သူရေးတဲ့စာထက် အဓိပ္ပါယ်ပိုရှိတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာဆိုတာ ရှိနေတာကို မင်းသိင်္ခ လက်ခံနိုင်တာအမှန်ပါပဲ။ မင်းသိင်္ခ ကိုယ်တိုင်က သူဟာ သာမန်လူတစ်ယောက်လို့ ခံယူတာကိုလဲ အလွန်လေးစားမိပါတယ်။ မကြာခင်က သေဆုံးသွားတဲ့ စင်ကာပူခေါင်းဆောင်ကြီး လီကွမ်းယူ သူသေပြီး သူ့အိမ်ကိုဖျက်ဖိုက သေတမ်းစာရေးထားပါတယ်။ အလားတူပဲ မင်းသိင်္ခ သူ့အထုပ္ပတိကို ရေးမသွားပေမဲ့ သူ့ဘဝဇတ်လမ်းကတော့ ရေးတဲ့လူပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးးက လွတ်ဖို့ မင်းသိင်္ခ တစ်ထောင့်တနေရာက ပါဝင်ပေးဆပ် အကျဉ်းချ ခံသွားခဲ့ပါတယ်။
လူတွေကို ကူညီခဲ့ပါတယ်။ ကူညီခြင်းရဲ့ရလဒ်ကတော့ အသက်ကိုပါပေးဆပ်ခဲ့တာပါ။
သခင်ယေရှုက လူ့လောကမှာ ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ပြသသွားပါတယ်။ လောကကြီးက တကယ်တော့ မတရားပါဘူး။ မတရားမှုကို တော်လှန်ချင်ရင်တော့ အသက်ပါပေးဆပ်ရပါလိမ့်မယ်။ မတရားမှုကို ငြိမ်ခံနေရင်လဲ လူညံ့ဖြစ်နေမှာပါ။ ဘာအလုပ်ပဲ ဖြစ်ပစေ..ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့အထိတော့ မတရားမှုကို တော်လှန်နေချင်တာ လူ့သဘာဝပါပဲ။
သည်အဆိုကို လူတော်တော်များများက ထောက်ခံမှာမဟုတ်ပေမဲ့၊ ခြွင်းချက်တစ်ခုပေးထားရင်တော့ ထောက်ခံကြပါလိမ့်မယ်။ ခြွင်းချက်ကတော့ မိမိဒုက္ခရောက်မှာကိုမလိုလားပါ ...။ လူတစ်ယောက် ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုရင် သူ့မှာလဲ ဒုက္ခရှိနေလို့ သူဒုက္ခမရောက်ချင်လို့ ကိုယ့်ကိုစိတ်ကောင်းစေတနာရှိပေမဲ့ ဒုက္ခပေးသလို ဖြစ်သွားရတာပါ။
ဘယ်လိုဒုက္ခဆင်းရဲကြုံတွေ့ပါစေ၊ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သူတစ်ဦးအတွက် သမ္မာကျမ်းစာကို နှလုံးသားထဲ စွဲနေတဲ့လူတစ်ယောက်အဖို့တော့ သေရမှာမကြောက်တော့ပါဘူး။ ဟေရှာယ ၅၃ မှာ မတရားစွာခံရသူအကြောင်း ပရောဖက်ပြုခဲ့ပါတယ်။
.ဟေရှာယ ပရောဖက်ပြုတဲ့အတိုင်း နှစ်၅၀၀ အကြာမှာ သခင်ယေရှု မွေးဖွားလာပါတယ်။ လူသားတွေကို တရားပြ၊။ တန်ခိုးပြပြီး၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံပါတယ်။ သေခြင်းရဲ့တခါးဝ တဖက်မှာ ကောင်းကင်ဘုံရှိတယ်ဆိုတာ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ လက်တွေ့ပြခဲ့ပါတယ်။ ယေရှုချစ်တော်မူသော တပည့်တော် ရှင်ယောဟန်ကျမ်းမှာ လူသားတွေကို ကူညီဖို့ရေးသားထားပါတယ်။
John ၂၁ ယေရှုက၊ ငါ၏သိုးတို့ကို ကျွေးမွေးလော့။ ၁၈ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ သင်သည် ပျိုသောအသက်ရှိစဉ် ကိုယ်ကို ကိုယ်ပတ်စည်း၍ အလိုရှိရာအရပ်ရပ်သို့ သွားလာတတ်၏။ သင်သည် အိုသောအခါ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်ပြီးလျှင်၊ သူတပါးသည် သင့်ကိုပတ်စည်း၍ သင်အလိုမရှိရာအရပ်သို့ ယူသွားလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ...... ယေရှုပြုတော်မူသော အခြားအမှုအရာအများ ရှိသေး၏။ ထိုအမှုအရာ ရှိသမျှတို့ကို အသီးအခြားရေးထားလျှင်၊ မြေကြီးမဆံ့နိုင်အောင် ကျမ်းစာများပြားလိမ့်မည်ဟု ထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏။
လူသားတွေကို ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ ..ဆိုတော့.. နှုတ်ကပတ်တော်ကို နေ့ညမပြတ် ဆင်ခြင်အောက်မေ့ပြီး၊ အနီးဆုံးရှိတဲ့ ကိုယ်အနီးကလူကို နားလည် ပုံသက်သေပြနိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Witmone at 4:58 PM0comments
နောက်ဆုံးသော အချိန်ကာလနီးပြီ။ အချိန်ပြည် ဘုရားနှင့်အတူရှိနေဖို့
ဟိုးယခင်က အင်တာနက်မှာ ပေါက်ကရ၊ ပုံတွေမြင်ရတယ်၊ လိင်စာတွေတင်ထားကြတယ်။ အခုခေတ်မှာ ပေါက်ကရဗီဒီယိုတွေပါ လူတွေရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေထဲ ရောက်ကုန်တယ်။ မိမိရဲ့ ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ ဘလောက်တခုကို လာရောက်ကြည့်သူ၊ ရှာဖွေသူများရဲ့ Search Word .. ကိုကြည့်လိုက်တော့ ..အား..လား.. လား.. ဝိညာဉ်ရေးရာစာစောင်ထဲမှာတော့ .. လိင်..မိန်းမ.. ဆိုတဲ့ညစာလုံးတွေ ရိုက်ပြီး ရှာဖွေနေတဲ့ မြန်မာတွေ မြောက်များစွာတွေ့ရပါတယ်။ ကိုယ်တင်ထားတဲ့ မြန်မာစာဝိညာဉ်ရေးစာအုပ် eBook တခုဆိုရင် ၃၀၀၀ လောက် လာဖတ်သွားကြလို့ တော်တော်လူဖတ်များတယ် ထင်ခဲ့တယ်။ တခြားနာမည်ကြီး မြန်မာစာရေးဆရာတွေရဲ့ နာမည်ကျော်ဝတ္တုတွေတောင် အင်တာနက်မှာ လာဖတ်သူ တစ်သောင်းကျော်ပဲ ရှိတော့ .. အင်း..မိမိတင်ပေးထားတဲ့ ဝိညာဉ်ရေးစာအုပ်ကို . ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေ ဆာငတ်စွာ ဖတ်ရှုနေကြတယ်...လို့ ရိုးသားစွာ မြင်လိုက်ပါတယ်။
ရုတ်တရက် .. Recommend to Read .. ဆိုတဲ့ စာတန်းအောက်မှာ စာအုပ်တချို့ကို မြင်လိုက်ပါတယ်။ တစ်သိန်းကျော် လာရောက်ဖတ်ရှုသွားတဲ့ မြန်မာစာအုပ်တွေပါ။ အသက် နဲ့ ရမက် .. စတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ စာအုပ်တချို့ကို ..ဘာများရေးထားသလဲ ကလစ်လုပ်ပြီး ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ အလိုလေး.. မြန်မာလူမျိုး မြောက်များစွာ ဖတ်ရှုတဲ့စာအုပ်က .. တနှာစာအုပ်ကြီးဖြစ်နေတာ ..တအံ့တသြ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ဒါ..ယောင်္ကျားတွေပဲ ဖတ်တာဖြစ်ပါမယ်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ယောင်္ကျားသည်တယောက်တည်း မနေကောင်း ...လို့ရေးထားပါတယ်။ မိန်းမကို မပြောပါဘူး။ ဒါကြောင့် အင်တာနက်မှာ ညစ်ညမ်းတဲ့ ဗီဒီယို၊ ဓါတ်ပုံ၊ စာပေတွေ လိုက်လံကြည့်ရှုနေသူများဟာ ယောင်္ကျားတွေ ၉၀% အထက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမတွေတွေ ညစ်ညမ်းပုံများ တိတ်တဆိတ် တစ်ယောက်ထဲ ကြည့်ခဲပါတယ်။ ယောင်္ကျားများပဲ ဒီအလုပ် ဘုရားမကြိုက်တာကို စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်ချင်ကြလို့.. ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ .. ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နဲ့ စကားကြာကြာပြောဆိုတာမျိုး မလုပ်ကြပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝိနည်းများမှာ ..ဘုန်းကြီးတွေ မိန်းမဆိုရင် သေတဲ့မသာတောင် လက်နဲ့မထိရဘူး.. ဆိုတဲ့အထိ ကြပ်တည်းစွာ တားမြစ်ထားပါတယ်။
အခုခေတ် မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ ရောက်လာတော့ .. တယောက်ထဲနေချိန်မှာ ညစ်ညမ်းပုံတွေ မက်ဆေ့တွေ ဝင်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ကြမ်းတမ်းညစ်ညမ်း၊ သတ်ဖြတ်တဲ့ မီဒီယာများကို အထူးသဖြင့် ယောင်္ကျားများ နှစ်သက်စွာ ကြည့်ရှုကြပါတယ်။ မိန်းမများကတော့ လှပတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားပုံကို စွဲမက်စွာကြည့်ရှုတဲ့ ဒရမ်မာများကို နှစ်သက်ပါတယ်။ ဖေ့ဘုတ် ဆိုတဲ့ လူမျက်နှာများ .. ပေါ်လာတော့ အင်တာနက်မှာ ကိုယ်နှစ်သက်သူ ဘာတွေလှုပ်ရှားနေသလဲ ဆိုတာကို တိတ်တခိုး ကြည့်ရှုနေခြင်းကလဲ .. စာတန်မာနတ်က အချိန်တွေကို ခိုးယူနေပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကလူတွေ .. မိုဘိုင်းဖုန်း၊ အင်တာနက်ရပြီး ပျက်စီးသူတွေ များနေပြီ။ ယုံကြည်သူ ..ကိုယ့်လူတွေ မပါသွားအောင် ဆုတောင်းကြပါ။ ယုံကြည်သူများ ..ကျမ်းစာ၊ နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ ပျော်မွေ့အောင် ဆုတောင်းကြပါ။
ဒါကြောင့် ... ညစ်ငြမ်းတဲ့ ဗီဒီယို၊ ရုပ်ပုံ၊ စာပိုဒ်များကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့က အားလပ်ချိန်များမှာ မိမိစိတ်ဝင်စားတဲ့ အလုပ်ကိုအချိန်ပေးခြင်း၊ မိမိရဲ့ အရှင်သခင် ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုပဲ ဖတ်ရှု၊ ဆွေးနွေး၊ ပြောဆိုခြင်းများ... တနည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်နဲ့မွေ့လျော်ရုံသာမက.. မိမိရဲ့ မိသားစုနဲ့လည်း အချိန်ပေးဖို့ပါ။
နောက်ဆုံးသော အချိန်ကာလနီးပြီ။ အချိန်ပြည် ဘုရားနှင့်အတူရှိနေဖို့ အသင့်ပြင်ထားဖို့ပါပဲ။
Posted by Witmone at 7:39 PM0comments
သခင်ယေရှု၏ ဘုရားဖြစ်ခြင်း (ဘုရားဂုဏ်တော်) နှင့် မောမွန်၊ ရဟိုးဝါအဖွဲ့များ မတူညီခြင်း
ခရစ်ယာန် အ ယူ ဝါ ဒ များ ထဲ တွင် ခ ရစ် တော် ၏ ဘု ရား ဖြစ် ခြင်း အ ယူ ဝါ ဒ သည် အ ရေး အ ကြီး ဆုံး သော အ ချက် ဖြစ် သည်။ အ ဘယ့် ကြောင့် ဆို သော် သ ခင် ယေ ရှု သည် သုံး ပါး တစ် ဆူ တွင် တပါး အပါ အဝင် ဖြစ် သည်။ ခရစ် တော် အကြောင်း လေ့ လာ ခြင်း အပိုင်း (၁) တွင် သုံး ပါး တ ဆူ အကြောင်း ပါ ပီး ဖြစ် သည့် အတွက် ထပ် မံ မ ရှင်း ပြ တော့ ပါ။
ယေ ရှု ခရစ် ၏ ဘု ရား ဖြစ် ခြင်း ကို ငြင်းပယ် ခြင်း သည် နောက် ဆုံး သော ကာ လ တွင် အ ကြီး မား ဆုံး သော န မိတ် လက္ခ ဏာ ဖြစ် သည်။ လက် ရှိ က မ္ဘာ လော က တွင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ငြင်း ပယ် ပြီး မှ မိ မိ ကိုယ် ကို ခ ရစ် ယာန် ဟု ပြော နေ သော အ ဖွဲ့ အ စည်း များ ရှိ သည်။ ထို အ ဖွဲ့ အ စည်း များ တွင် အ ထင် အ ရှား ဆုံး အ ဖွဲ့ အစည်း ကြီး (၅) ခု ကို ရှင်း ပြ သွား ပါ မည်။
၁။ မော် မွန် အ ယူ ဝါ ဒ Mormonism
မော် မွန် အ ယူ ဝါ ဒ ကို အ မေ ရိ ကန် လူ မျိုး တ ဦး က တည် ထောင် ခဲ့ သည်။ ထို ပု ဂ္ဂိုလ် မှာ အ စ္စ လမ် ဝါ ဒ ကဲ့ သို့ ပင် သူ့ ကိုယ် သူ ယေ ရှု ခ ရစ် ဟု ထင် မှတ် သည်။ မော် မွန် အယူ ဝါ ဒ လက် ခံ ယုံ ကြည် သူ များကို အမေရိကန် တွင် ရှိ နှင့် ပြီးသား ဂိုဏ်းဂဏ အဖွဲ့ အစည်း များက ညှင်းပမ်း နှိပ် စက် သဖြင့် န ယူး ယောက် မြို့တွင် နေ ၍ မ ရ သော ကြောင့် အမေရိကန် အ နောက် ပိုင်း ယူတာ Utah ပြည် နယ် တွင် သွား ရောက် နေ ထိုင် ခဲ့ ကြသည်။ ယူတား ပြည်နယ် သည် ရှမ်းပြည်နယ် ကဲ့ သို့ တောတောင် ထူ ထပ်သော ပြည် နယ် ဖြစ် သည်။ ထူး ခြား ချက် မှာ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ် ရေး မှုး များ သည် မော်မွန် ဂိုဏ်း ဝင် များ ဖြစ် ပြီး၊ သူ တို့ ၏ အ ယူ ဝါ ဒ အ ရ ယောင်္ကျား တစ် ယောက် သည် မိန်းမ တစ်ယောက် ထက် ပို ယူ ခွင့် ပေး ထား သည်။
အ မေ ရိကန် တွင် ယူ တား ပြည်နယ် တစ်ခုထဲ၌ သာ လျှင် ဇနီး တစ်ဦး ထက် ပို ယူ ခွင့် ရှိသည်။ တ က္က သိုလ် ဘွဲ့ ရ ကျောင်း သား များ တိုင်း က မော် မွန် သာ သနာ ပြု ရသည်။ သာ သနာ မ ပြု လို ၍ ငြင်း ပယ် လျင် ထို သူ သည် တက္ကသိုလ် မအောင် မြင်နိုင်။ ဘွဲ့ လည်း မ ရ နိုင် ပါ။ မော်မွန် သာ သ နာ ပြု များ စွာ တကမ္ဘာ လုံး သို့ သာ သ နာ ပြု စေ လွှတ် ကြသည်။ မြန်မာ ပြည်တွင်း ၌ လည်း မော် မွန် သာ သ နာ ပြု များ ရောက် နေ ပြီ ဖြစ် သည်။ သူ တို့ က ပထမ ဆုံး ခြေ လှမ်း အဖြစ် အ င်္ဂ လိပ် စာ ကို သင် ပေး သည်။ သူ တို့ က အ လွန် ပါး နပ် သည်။ လူ တိုင်း က အ င်္ဂလိပ် စာ တတ် မြောက် လို သည်ကို သိ သော ကြောင့် အ င်္ဂ လိပ် စာ သင် ပေး ပြီး မှ နောက် မှ မော် မွန် အ ယူ ဝါ ဒ ကို သင် ပေး လေ့ ရှိ ကြ သည်။
မော် မွန် သာ သ နာ ပြု လူ ငယ် များ က တစ် ပုံ စံ တည်း အနက်ရောင် ဝတ်စုံ အပြည်ဝတ်ပြီး၊ ဆံ ပင် ကို အ တို သပ် သပ် ရပ် ရပ် ဝတ် ဆင် ထား သည့် စ တိုင် ဖြစ် သည်။ ယ ခု အ ခါ ရန် ကုန် နှင့် မန္တလေး တွင် ခြေ ကုပ် စ ခန်း ယူ ထား ကြ သည်။ သူ တို့ ၏ အ ဓိ က ရည် မှန်း ချက် မှာ ခရစ်ယန် ဖြစ် ပီး သူ များကို မော် မွန် အ ယူ ဝါ ဒ အ တွင်း သို့ ဝင် ရောက် လာ အောင် ဆွဲ ဆောင် ခြင်း ဖြစ် သည်။ ထို့ ကြောင့် မော် မွန် တို့ ၏ တိုက် ခိုက် မှု ကို တွန်း လှန် ရှောင် လွှဲ နိုင် ရန် ယေရှု ခရစ် ၏ ဘုရား ဖြစ် ခြင်း ၊ ဘု ရား ဂုဏ် တော်ကို တိ တိ ကျ ကျ သိ နိုင် ရန် လို အပ် သည်။
၂။ ယူ နစ် တေး ရီး ယန်း နီးဇင် Unitarianism
ယူနစ် Unit သည် တစ် ခု တည်း ဟု အ ဓိ ပ္ပါယ် ရ သည်။ ထို ဂိုဏ်း ဂ ဏ သည် သုံး ပါး တစ် ဆူ ကို ငြင်း ပယ်ပြီး ထာ ဝ ရ ဘုရား တစ် ဆူ တည်း ကို သာ ကိုး ကွယ် သည့် အ ယူ ဝါ ဒ ဖြစ် သည်။ အ မေ ရိ ကန် အ ရှေ့ မြော်က ၊ န ယူး အင်္ဂလန် New England တို့ တွင် လွှမ်း မိုး ကြီး စိုး သည်။ က မ္ဘာ ပေါ် တွင် ထင် ရှား ကျော် ကြား သည့် ဟား ဗတ် တက္ကသိုလ် တွင် ဤ ဝါ ဒ ကို သင် ပေး သည်။ ဤ ဂိုဏ်း ၏ အား နည်း ချက် မှာ ပင် လယ် ရပ် ခြား သာ သ နာ ပြု များ မ စေ လွှတ် နိုင် ပါ။ ထို့ ကြောင့် သူ တို့ ကို ကြောက် စ ရာ မ လို ပါ။
၃။ ယေ ဟော ဝါ သက် သေ ခံ များ Jehovah Witnesses
သူ တို့ သည် အထက် ပါ ယူ နီ တေး နီး ယန်း နှင့် ဆင် တူ သည်။ ခ မည်း တော် တ ပါး တည်း ကို သာ ကိုး ကွယ် ကြ သည်။ သူ တို့ တွင် ကိုယ် ပိုင် ဂိုဏ် ဂ န ကြီး ရှိ သည်။ အာရီး ယမ် နီ ဇင်း Arius က စ တင် တည် ထောင် ခဲ့ သည်။ ယေ ဟော ဝါ သက် သေ ခံ များ ကို တ က မ္ဘာ လုံး သို့ အ မြောက် အ များ စေ လွှတ် ထား သဖြင့် တ တိ ထားရမည်။ ယေ ဟော ဝါ များ မှာ မော် မွန် များ ထက် အင် အား တောင့် တင်း သဖြင့် ပို၍ သတိ ထား ရ မည်။ ယေ ဟော ဝါ များ ၏ အ ဓိ က ဆွဲ ဆောင် သူ များ မှာ ခရစ်ယာန် ဖြစ် ပီး သူ များ ကို စွဲောင် ပြောင်း လဲ ရန် ဖြစ် သည်။ ထို့ ကြောင့် ယေရှု အကြောင်း ကို ဂဃနဏ မ သိ သော ခရစ်ယာန် အ များ စု က ယ ဟော ဝါ သက်သေ ခံ များ စွဲ ဆောင် မှု နောက် သို့ လိုက်ပါ သွား ကြ သည်။ ထို့ ကြောင့် ခရစ်ယာန် တစ်ယောက် အနေ ဖြင့် ခ ရစ် တော် အကြောင်း ဂဃနဏ သိ ထား ရ မည်။ သင်းအုပ် ဆရာ များ က မိ မိ တို့ ၏ အသင်း သား များ အား၊ ဤ အကြောင်း ကို အ မြဲ တမ်း သင် ကြား ပေး စေ လို သည်။
မော် မွန် နှင့် ယေ ဟောဝါ သက်သေခံ များ ထို ကဲ့သို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ သက် သေ ခံ ရ ခြင်း အ ကြောင်း မှာ အ ခြား သော ခရစ်ယန် များကို မသိမ်း သွင်း နိုင် လျင် ကယ် တင် ခြင်း စိတ် ချ မှု မ ရှိ နိုင် ဟု သွန် သင် ပေး ထား သော ကြောင့် ဖြစ် သည်။ ကယ် တင် ခြင်း ဆုံး ရှုံး မှာ စိုး ရိမ် သော ကြောင့် ခရစ် ယန် များကို သိမ်း သွင်း မှ သာ ကယ် တင် ခြင်း စိတ်ချ ရ သည် ဟု မှတ် ယူ ကြ သည်။ ကျေး ဇူး တော် ကြောင့် ကယ် တင် ခြင်း ရ ရှိ သည် မ ဟုတ် ပဲ အလုပ် လုပ် မှ ကယ် တင် ခြင်း ရ မည် ဖြစ် သော ကြောင့် စိတ် ပျက် စ ရာ ကောင်း လှသည်။ ထို့ ကြောင့် ရ ဟိုး ဝါ သက် သေ ခံ တစ်ဦး သည် အ ခြား သော သူ တစ်ဦး အား ယေဟိုးဝါ သက် သေ ခံ ခရစ်ယာန် တစ်ဦး ဖြစ် လာ ဖို့ ရန် သည် သေရေး ရှင်ရေး တမျှ အရေး ကြီး လွန်း လှ ပါသည်။
ယေဟိုးဝါ တစ် ယောက် သည် အ ခြား သော ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘသာ ထဲ မှ ယေဟိုးဝါ ဖြစ်လာခြင်း ထက် ခရစ်ယာန် ဘာသာ ထဲ မှ ယေ ဟိုး ဝါ ဖြစ် လာ ခြင်း ကို ပို ၍ အ လေး ထား သည်။ ခ ရစ် ယန် များ ကို တန် ဖိုး ကြီး သည့် ငါး များ အ ဖြစ် သတ် မှတ် ကြ ပီး အ ဓိ က ပစ် မှတ် အ ဖြစ် ထား ကြ သည်။ ထို့ ကြောင့် သင်းအုပ် ဆရာ များ အနေ ဖြင့် အထူး သတိ ထားရ မည် မှာ မိတ် ဆွေ ၏ အ သင်း သား တစ် ယောက် သည် ယေ ဟိုး ဝါ သက် သေခံ တစ် ယောက် ဖြစ် သွား လျင် ဘုရား သခင် ၏ အပြစ် တင် ခြင်း သင့် ပေါ် ကျ ရောက် လာ မည် ဟု စိုးရိမ် စ ရာ ရှိ သည်။
၄။ ယူနီဖီကေးရှင်း အသင်း တော် Unification Church
ဤ အသင်း တော် ကို ဆန် မြောင် မွန်း Sun Myong Moon ခေါ်သော ကိုးရီးယား လူမျိုး တဦး က တည် ထောင် သည်။ ယ ခု အ ချိန်တွင် ဆန် မြောင် သည် အသက် ၈၀ ခန့် (၂၀၁၀) ရှိ ပီ ဖြစ် သည်။ သူ သည် တ ချိန် က ပ ရက်စ် စီ ဘေး ရီး ယန်း အသင်း တော် လူ ကြီး တစ်ဦး ဖြစ် ခဲ့ သည်။ နောင် တွင် ဆန် မြောင် က ယေရှု သည် လူ များကို ကယ် တင် ရန် လာ ရာ တွင် ကယ် တင် ခြင်း အ လုပ် ကို မ လုပ် နိုင် သော ကြောင့် လက် ဝါး ကပ် တိုင် တွင် အသက် ဆုံး ရသည်။ ထို့ ကြော်င့ ဒု တိ ယ အကြိမ် မ ကြွ လာမီ စပ်ကြား ကယ် တင် ခြင်း အ လုပ်ကို လုပ် ကိုင် နိုင် ရန် အတွက် ဆန် မြောင်ကို စေလွှတ် သည် ဟု ခံ ယူ သော ကြေငြာ ချက် စာ တစောင် ကို ထုတ် ပြန် ခဲ့ သည်။ ထို အသင်း တော် သည် တ ဖြေး ဖြေး ကျယ် ပြန့် လာ ပြီး၊ ဥ ရော ပ တိုက် သား များ ၊ အ မေရိ ကန်များ နှင့် ကို ရီး ယန်း၊ ဂျပန် လူ မျိုး မြောက် များ စွာက သူ့ နောက် သို့ လိုက် ကြသည်။ တခါတရံ စည်း ဝေး ပွဲ ကျင့် ပ ပြီး ထို စည်း ဝေး တွင် ကမ္ဘာ တဝှမ်း လုံး ရှိ ဝန် ကြီး ချုပ် များ၊ သမ္မတ များ ကို ပင် တက် ရောက် စေ သည်။ သူ သည် အ လွန် ပါး နပ် သော လိမ္မာသူ တစ် ဦး ဖြစ် သည်။ ထို အ စည်း အ ဝေး ကို လည်း ယူနီဖိကေးရှင်း အစည်း အ ဝေး ဟု ခေါင်းစဉ် မတပ်ပဲ၊ ကမ္ဘာ့ ငြိမ်း ချမ်း ရေး စည်း ဝေး ပွဲ ဟု အ မည် တပ် သည်။ ဤ ဂိုဏ် ၏ အကြီးမား ဆုံး သော သြ ဇာ လွှ်မ်း မိုး မှု အရှိ ဆုံး စာ တိုက် ဖြစ် သည့် ဝါ ရှင် တန် ပို့စ် The Washington Post ကို ဆန် မြောင် ပိုင် သည်။ အမေရိက ရှိ အမြင့် ဆုံး အင်ပါယာ စတိတ် ကို လည်း ပိုင် ဆိုင် သည်။ အမေရိကန် ပီး လျှင် ဒုတိယာ အများဆုံး သာသနာ ပြု စေလွှတ် သော နိုင်ငံ မှာ ကိုးရီးယား နိုင်ငံ ဖြစ် သည်။ သို့သော် စစ်မှန် သော သာသနာပြု များ စေလွှတ်သကဲ့သို့ လွှဲမှားသော သာသနာပြု များကို လည်း စေလွှတ်သည်။ ယူနီဖိကေးရှင်း အသင်း တော် များ သည် ခွင့် ပြုချက် မပါ ပဲ မင်္ဂလာ ဆောင်နှင်းခွင့် မရှိ၊ အသင်းတော် က သာ စီ မံ ပေး ထား ရ သည်။ တံခါး ပိတ် ဝါဒ ဖြစ်ပီး အသင်း သား များကို ချုပ် ကိုင် ထား သည်။ အ သင်း သား များ တွင် ဇနီး လောင်း များ အ တွက် ရွေး ချယ် ရာ ၌ ဆုံး ဖြတ် ပိုင် ခွင့် မရှိ၊ လက်ထပ် မည့် သူ နှစ် ဦး ကိုယ် တိုင် ပင်လျှင် ကြိုက် သည် ဖြစ် စေ၊ မကြိုက် သည် ဖြစ် စေ အသင်းတော် ကိ စီစဉ် ပေး သည့် အတိုင်း လက်ထပ် ရ သည်။ အုပ် စု လိုက် မင်္ဂလာ ဆောင် ကြ သည်။ နှစ် စဉ် တနှစ် လျင် နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ် အုပ်စုလိုက် မင်္ဂလာ ဆောင် ကြသည်။ အသင်းတော်က ထို ဇနီး မောင်နှံကို ကွဲကွာ စေလို လျင် ကွဲကြရသည်။ အယူဝါဒမှာ လက်မထပ် မှီ အ သင်း တော် ခေါင်း ဆောင် နှင့် လိင် ဆက် ဆံ မှု ပြု လျင် ထို မိန်း ကလေး သည် အမြင့် ဆုံး သော ကောင်း ကြီး မင်္ဂလာ ခံ အပ် သော သူ ဟု လွဲမှား စွာ ယုံကြည် ကြသည်။ ဆန်မြောင် မွေး ဖွား ရာသည် ကိုးရီးယား မြေကို သန့်ရှင်း မြင့် မြတ် သည့် နယ် မြေ ဟု သတ်မှတ် ကြသည်။ ကောင်း ကြီး ရလို သူများ ကိုးရီးယား သို့ အလည် လာကြသည်။ ပန်းရောင်းသော လူငယ်များကို ကမ္ဘာအနှံ သွားစဉ် တွေ့ပါက ယူနီဖီကေးရှင်း မှ ဟု နားလည် ရသည်။
၅။ ဘာသာအများ အယူဝါဒ Religious Pluralism
ဘာသာအများ ကိုးကွယ် မှု အ ယူ ဝါ ဒ ကို ယ နေ့ ဂိုဏ် ဂဏ အသင်း တော် များ က လက် ခံ ကျင့် သုံး ကြသည်။ အ ထူး သ ဖြင့် လစ် ဘရယ် များ က ခံ ယူ ကြ သည်။ သူ တို့ ၏ ခံ ယူ ချက် ယုံ ကြည် ချက် မှာ ဘာ သာ တိုင်း တွင် ယေရှုသည် အခြား အမည် တစ် မျိုး ဖြင့် ပါ ဝင် နေ သည်။ အ ထက် ပါ ဂိုဏ် ဂ ဏ ၄ ခု သည် အပြင် ဘက်မှ တိုက် ခိုက် လျက် ရှိပြီး။ ဘာ သာ အများ အယူ ဝါ ဒ သည် အ တွင်း ၌ တိုက် ခိုက် နေသည်။ ယနေ့ ခရစ်ယန် ၈၀ ရာနှုန်း ဘာသာ အများ အယူဝါဒကို ယုံကြည် လာ ကြ သည်။ ပြ င် ပ တွင် ရှိ သော လွဲ မှား သော အယူ ဝါ ဒ ထက် အ တွင်း ၌ ရှိ သော အယူဝါဒ က ပို ၍ ဆိုး ရွား သည်။ နောက် ဆုံး သော ကာ လ တွင် ဤ သို့ သော န မိတ် လက္ခဏာ များ ဖြစ် လာ လိမ့် မည် ဟု သခင် ယေရှု မိန့် တော် မူ ခဲ့ သည်။
ထို့ ကြောင့် ခရစ် တော် အကြောင်း ကို လေ့လာရန် အထူး အရေးတကြီး လို အပ် လှ ပါ သည်။
AMT ခရစ်တော်အကြောင်း လေ့လာခြင်း စာ၁၈၂-၁၈၆
Dr Thomas Hwang
Posted by Witmone at 4:42 AM0comments
အသွေးသားတက်မက်မှုကြောင့်လား၊ စာတန်မာနတ်ကြောင့်လား.. စာရေးသူ ဘုရားမကြိုက်တာတွေ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကျမ်းစာလေ့လာတဲ့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးနဲ့ ဆွေးနွေးရာမှာ .. ပညတ်တရား၁၀ပါး မကဘူး၊ ၆၀၀ကျော် ဓမ္မဟောင်းမှာ ရေးထားတယ်။ ဓမ္မသစ်မှာတော့ ၂ခုပဲ၊ ဘုရားသခင်ကို ကိုယ်နှင့်အမျှချစ်လော့၊ ကိုယ်နှစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုလဲ ချစ်လော့ ...ဆိုတာကို ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးက ၁ယော ၄း၈ ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူသည်။ ကိုယ့်မောင်နှမကို ချစ်နိုင်ရမည်၊ ခွင့်လွှတ်နိုင်ရမည် ..သို့မှသာ ဘုရားသခင်ကို တကယ်ချစ်နိုင်မည်...လို့ ဆွေးနွေးလာပါတယ်။ စာရေးသူကတော့ ပညတ်တော် ၁၀ပါးမှာ ဘုရားခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ ထိပ်ဆုံး(၃)ခု ရှိတယ်။ ကျန်တဲ့၈ခုကိုတော့ ဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ် ..လို့ပြန်ပြောပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် ကျမ်းစာကို လှန်ကြည့်ပြီး ပထမ (၃)ချက်ကို ဖတ်ကြည့်ပါတယ်။
၁။ ငါမှတပါးအခြားသောဘုရားကို မကိုးကွယ်နှင့်
၂။ ငါ့ဖို့အလိုငှာ ရုပ်ထုမပြုလုပ်ရ
၃။ ငါ့၏နာမကို အလွဲမသုံးနှင့် ...
အခြားအချက်များမှာ သူ့တပါးပစ္စည်းမခိုးရ၊ မတက်မက်ရ၊ မဟုတ်မှန်သက်သေမခံရ ..စသဖြင့်ပါပါတယ်။
အခု ဆွေးနွေးမှာကတော့ တက်မက်မှုများမှာ သရဖူဆောင်းတဲ့ တက်မက်မှုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျည်ဆန်တစ်တောင့် လို့ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ပါတယ်။
အသွေးအသား ၊ ခန္တာကိုယ်တက်မက်မှုကြီး
၁။ ယောင်္ကျားများအတွက် ကာမတဏှာဖြစ်သည်။
၂။ မိန်းမများအတွက် အလှအပ် ဖြစ်သည်။
တက်မက်မှုတွေ မြောက်များစွာရှိပါတယ်။ အခုရေးတဲ့ အချက်၂ခုက အများဆုံးဖြစ်တတ်တာပါ။ အာရုံ၆ပါး တက်မက်မှုတွေ များစွာထဲမှာ အမြင်၊ အကြား၊ အနံ့၊အထိတွေ့၊ လျှာ၊ စအို စတဲ့ ဒွာရပေါက်များစွာ ရှိပါတယ်။ အနှိပ်အနင်းခံပြီး သာယာနေသူ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး အသွေးသားထဲသွင်းပြီး သာယာနေသူ ... ဂလာတိ ၅း၁၀မှာ အသွေးသားမဟုတ်တဲ့ ဒေါသ၊ လောဘ၊ ရန်တွေ့ခြင်း၊ ဆူပူခြင်း ..စတာတွေလဲ ပါဝင်ပါတယ်။
ယောင်္ကျားများအတွက် ကာမတဏှာ ဆိုရာမှာ သိပံပညာအရလည်း ယောင်္ကျားများ၊ မိနစ်တိုင်း ကာမတဏဌာစိတ် ပေါ်ပေါက်တတ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဆန့်ကျင့်ဖက် မိန်းမများနှင့် သာယာတတ်ခြင်း၊ မိန်းကလေးများကို ယောင်္ကျားများထက် ပိုသနားတတ်ခြင်း၊ ထိုထက် အဆင့်တက်လာတဲ့ ဖေါက်ပြန်ခြင်း၊ ပြည့်တဆာမှီဝဲခြင်း.. စတာတွေဟာ ယောင်္ကျားများအတွက် အလွန်ကြီးမားတဲ့ ရန်သူ၊ ကျည်ဆံဖြစ်ပါတယ်။ စာတန်ရဲ့ လက်နက်လို့ဆိုရင် ..မိန်းမတွေက အလွန်စိတ်ဆိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာတန်ရဲ့လက်နက် ကာမတဏှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသွေးသားတက်မက်တဲ့ ကာမတဏှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနု ရေးသားတဲ့ ကာမတဏှာ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ခဏခဏ ဖတ်မိပါတယ်။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတော့ ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီး မိန်းမချောများစွာနဲ့ ပျော်ပါးနေတဲ့ ကုလားသူဌေး၊ မြန်မာသူဌေးများကို အားကျချင်သလိုလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကာမတဏှာ စာအုပ်ရေးတဲ့ ဦးနုကိုယ်တိုင် အသက်၂၀အရွယ်မှာ အပြောကောင်းတဲ့ ပြည့်တဆာ မိန်းမကို လက်ထပ်ယူမဲ့အထိ ဆင်မုန်ယိုသလို ကြမ်းရမ်း၊ ရန်ကုန်ကောလိပ် စာမေးပွဲကျခဲ့ရတာတွေ ဖတ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှစ်နိုင်ငံ စစ်တိုက်ကြရင် စပိုင်၊ ထောက်လှမ်းရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာ အမျိုးသမီးများကို အသုံးချကြပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ မိန်းမမာယာ၊ ကာမတဏှာကြောင့် တိုင်းပြည်ပျက်စီ၊ စစ်ရှုံးရတာမျိုးတွေ ရှိလို့ အစ္စရေးနိုင်ငံမှာဆို အမျိုးသမီးများ စစ်မှုထမ်းခြင်းကို လုံးဝတားမြစ်ထားပါတယ်။ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် စစ်တပ်တခုကို ရောက်လာရင် ဒီအမျိုးသမီးကြောင့် ယောင်္ကျား စစ်သားကြီးတွေ ရန်ဖြစ်၊ အဆင်မပြေဖြစ်တတ်လွန်းလို့ ...အစ္စရေးစစ်တပ်မှာ အမျိုးသမီးစစ်သား၊ စစ်မတိုက်ခိုင်ပါဘူး။ ယောင်္ကျားတွေရဲ့ ကာမတဏှာစွဲလမ်းလာရင် တိုင်းပြည်နစ်နာလှပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိန်းမတွေအများကြီးယူတဲ့ ဗိုလ်နေဝင်းဆိုသူ စစ်အာဏာရှင်ကြောင့် အနှစ်၅၀ကျော် ..တိုင်းပြည်ဖွတ်ဖွတ်ကြေခဲ့ရပါတယ်။ အခုတော့ ပြန်လည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပါပြီ။
မိန်းမများအတွက် အလှအပ ဆိုတာ၊ အံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမတိုင်း အလှပကြိုက်နှစ်သက်ပေမဲ့ တချို့ ယောင်္ကျားစိတ်ရှိတဲ့ မိန်းမ၊ ဘုရားနဲ့မွှေ့လျော်တဲ့မိန်းမ၊ စသဖြင့် အလှအပ ဖီးလိမ်းမပြင်ဆင်တဲ့ မိန်းမများလည်း ရှိပါတယ်။ အများစုသော မိန်းမများက အလှပ ကြိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ဘယ်မိန်းကလေးမဆို လှတယ်ပြောလိုက်ရင် ..သဘောကျသွားကြတာပဲ။ ငါလို ဝဝ၊ ရုပ်မလှတာတောင် ဒီနေ့ပိုလှသလိုပဲ ပြောခံရရင် ဘဝင်ခိုက်သွားပြီး၊ အဲဒီမိန်းမရဲ့ အပြုံးကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့... ငါတို့မိန်းမတိုင်း လှတယ်ပြောရင် ကြိုက်တယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ကို တယ်ချောပါလား၊ တယ်လှပါလား.. ပြောဆိုမြှောင့်ပင့်တတ်ခြင်းဟာ လူပိန်းကြိုက် နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမများကို ချောလှတယ် ပြောချင်ရင်၊ တယ်ခန့်ငြားပါလား.. Today, so smart လို့ပြောတာကောင်းပါတယ်လို့ ..စာရေးသူကို ဆုံးမပြောဆိုပါတယ်။ စာရေးသူက မိန်းမငယ် လှပသူများဆိုရင် အသံနဲ့မျက်လုံးအရောင် ပြောင်းသွားတတ်တာ ဒီအမျိုးသမီး ရိပ်မိပုံရပါတယ်။ ယောင်္ကျားလဲ အလှပ ကြိုက်တတ်ပေမဲ့ မိန်းမလောက်တော့ အလှအပအတွက် ဖီးလိမ်းပြင်ဆင်၊ မှန်ခဏခဏ မကြည့်တတ်ကြပါဘူး။ တနေ့ကလဲ ဘုရားတရားနဲ့ မွေ့လျှော်တတ်တဲ့ မိန်းမချောတစ်ဦး အသက်၅၀အရွယ်ကြီးကို ပိုလှစေတဲ့ ဆေးလာရောင်းတာ ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ပေးပြီးဝယ်မလို့ လုပ်နေတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက စိတ်ပျက်ပြီး၊ မပြောတော့လဲ..အသက်၂၀အရွယ်၊ သားဖြစ်သူက ကြမ်းပြင်ပေါ်လူးလိမ့်ကန့်ကွက်တယ်။ မရပါဘူး။ ၃ခါလောက် တွေ့ပြီးပြီဆိုတော့ ငွေပေးချေဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။ တလလောက် ငွေစုဆောင်းပြီး သွားပေးမဲ့နေ့ရက်မှာပဲ ... အရောင်းအေးဂျင့်ကောင်ကလေးနဲ့ စကားပြောနေစဉ်၊ တယ်လီဖုန်းဝင်လာတယ်။ ငါတို့သင်းအုပ်ဆရာရဲံ မော်တော်ကား ရန်ကုန်မှာကားတိုက်မှုဖြစ်ပြီး၊ ငါတို့သင်းအုပ်ဆရာနောက်လိုက်တဲ့ လူတစ်ယောက် ကားကြိတ်ခံရလို့ သေသွားပြီ၊ ဆုတောင်းပေးရအောင်..လာခဲ့ပါ..ခေါ်သံကြားလို့၊ ရုတ်တရက် ..သြော်... ငါက အလှအပအတွက် လုပ်နေတာ၊ ငါလဲ သေမှာပါလား ..သံဝေဂရပြီး အလှအပ ဆေးကို မဝယ်ဖြစ်တော့ဘူး..လို့သက်သေခံပါတယ်။
ကျည်ဆံတစ်တောင့် ဖြစ်တဲ့ ယောင်္ကျားတွေရဲ့ ကာမတဏှာ နဲ့ မိန်းမများအတွက် အလှအပ အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အသွေးသားတက်မက်မှု Flesh ဖြစ်ပါတယ်။ စာတန် Satan ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ဖာသာ မဟုတ်တာတွေလုပ်ပြီး စာတန်ကို ပုံချနေလို့ စာတန်တောင်ငိုရတဲ့ ရယ်စရာပုံပမာများလဲ ရှိပါတယ်။ မကောင်းမှု တစ်ခုလုပ်ပြီးရင် ဖုံးဖိဖို့မလုပ်သင့်ပါ။ ဘုရားသခင်ထံ ဝန်ချတောင်းပန်ပေမဲ့၊ ရင်းနှီးမိတ်ဆွေတစ်ယောက်လောက်ကိုလဲ ဝန်ချပြောဆိုရပါတယ်။ ဒါမှ ဒါဝိတ်မင်းကြီးလို သူ့ အတူထိုင်ပြီး၊ ပြောနိုင်တဲ့ ပရောဖက်နာသန် ကို ဘုရားသခင်စေလွှတ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလှပကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အမျိုးသမီးများနဲ့ ကာမတဏှာနှစ်သက်တဲ့ အမျိုးသားများ ဗာသရှေဘ (စစ်သူကြီးမိန်းမ) နဲ့ ဒါဝိပ်မင်း (ဘုရင်) တို့ရဲ့ တက်မက်မှုပြသနာကို သတိရကြမှာပါ။ အချိန်မီ ကိုယ့်အပြစ်ကိုသိရှိသွားပြီး ပြင်လိုက်ရပါတယ်။ နောက်မလုပ်နဲ့ပေါ့။
အနည်းငယ်ရေးလိုက်ပါတယ်။ ဘုရားသခင် ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေ။
Burmese Bible 2015
Posted by Witmone at 5:11 PM0comments